Mwepu Illinois Cannabis - Otu esi ewepu nkwenye osisi cannabis
Mwepu na Illinois Cannabis
Kọwapụta Nkọwapụta Ahụike Illinois na Ọha na Ọha
Ity hara nhatu ndi mmadu;
Mmefu Ọpụpụ Illinois Cannabis na-abịa maka ndị ahụ ejidere maka, ma ọ bụ ịma ha ikpe, maka mmebi iwu tozuru oke maka mkpochapụ Iwu Cannabis na Iwu Iwu nke ga-aba uru na Illinois na Jenụwarị 1, 2020. N'ụzọ dị ala, ịda oke cannabis dị ala (nwere ihe ruru 500 gram, ma ọ bụ ebumnuche kesaa ihe ruru gram 30) a ga-akpopụ otu ugboro cannabis bụ iwu na Illinois. Anyị kpuchitere iwu na edemede a ma nye gị nkọwa.
ruo 800,000 ndị mmadụ na Illinois ga-etozu maka ikpochapụ nke mmebi iwu cannabis ha mere n'oge gara aga 'na mpụ ole na ole ndị ọzọ n'okpuru Nkebi 4 na 5 nke Iwu Nchịkwa Cannabis nke Illinois.
Na ibe a, anyị na-enye ọtụtụ ozi maka ihe a ga-eji chụpụ mmebi cannabis yana otu nke ahụ si emetụta ọnọdụ gị dị ka onye na-ahụ maka ịha nhatanha na ụlọ ọrụ ụlọ ọrụ cannabis ọhụrụ nke Illinois.
Etu esi ewepu nkwenye osisi cannabis na Illinois
Nweta ndekọ njide gị, mgbe ụfọdụ a na-akpọ "mpempe akwụkwọ rap", maka njide cannabis ma ọ bụ nkwenye ya ma lelee ma ha tozuru.
Ikike ruru 500 gram, ma ọ bụ ebumnuche ikesara gram 30 ruru eru maka mkpochapu n'okpuru iwu cannabis ọhụrụ.
Kpọọ ụlọ ọgwụ enyemaka mpaghara gị ma nweta echiche na ndekọ gị ka ịmalite usoro mkpocha ahụ chọrọ ọrụ ọzọ.
A ga-ebupụ "Mpụ Cannabis Nke Nta" na-akpaghị aka, mana nke ahụ bụ naanị ihe nwere ike dị gram atọ (gram 30).
Nyefee akwụkwọ mkpesa maka ọpụpụ n'ụlọ ọrụ odeakwụkwọ sekit.
Gaa na ụlọ ikpe ma ọ bụrụ na gọọmentị etinye akwụkwọ mkpesa ọ bụla maka akwụkwọ ikike izipu ọpụpụ nke Cannabis
Kwee ka ụlọ ikpe nye gị arịrịọ iji belata nkwenye cannabis ma ọ bụ ijide gị.
Ndị uwe ojii obodo na ndị uwe ojii steeti ga-ewepu ndekọ gị, nke nwere ike iwe ihe dị ka ụbọchị 60 ka enyere n'iwu.
Nke a bụ njikọ nke akụkọ sitere na Colorado na-egosi mbelata njide & DUI mgbe ịghasịrị ikike cannabis.
Mwepu Cannabis na Nha ndi mmadu na Illinois
Mwepu akpaaka nke Illinois Cannabis maka mmebi Cannabis pere mpe
(G-5) “Nrụrụ Ọgwụ Nwere Ike” putara imebi iwu
nke Nkebi 4 ma ọ bụ 5 nke Iwu Njikwa Ahụhụ
gbasara ihe karịrị gram 30 nke ihe ọ bụla
nwere ogwu, ma eweghi ya
tinye nkwalite ntaramahụhụ n'okpuru Nkebi nke 7 nke
Iwu Nchịkwa nke Cannabis ma ọ jikọghị ya na
njide, nkwenye ma ọ bụ ọnọdụ ndị ọzọ maka ime ihe ike
mpụ dịka akọwara na subsection (c) nke Nkebi 3 nke
Ikike Ndị Mpụ Mpụ na Ndịàmà Mara.
Nkwupụta Nkọwapụta Banyere Cannabis na Illinois
Onye Ọha Akwukwo Ibe Onye Ọha
20% nke akara nke ngwa gị
Ihe ato ndi n’inye akwukwo nke ndi mmadu
Biri na “Ógbè Na-akpata Nsogbu”
Jidere maka "mmejọ ruru eru ịpu ya"
Ndị ọrụ oge 10 nwere 51% site na nọmba 1 ma ọ bụ 2
Mmehie ruru eru maka mkpofu n'okpuru Iwu Cannabis
Mmejọ obere osisi cannabis
Ọ bụ karịa gram 30
Enweghị nkwalite ntaramahụhụ
Imebi nkebi nke 4 ma ọ bụ 5 nke Iwu Njikwa Cannabis
Misdemeanor ma ọ bụ Klas 4 Felonies
Iwu Nchịkwa nke Cannabis - Klas 4 Felony
Nkebi nke 4 - Ikike
Mpempe akwụkwọ C - ruo 100 gram
Offensesonye iwe ga - esochi klas 4
Ngalaba D - 101 ruo 500 grams
Mmejọ mbụ naanị - Klas 4 Felony
Offensesonye iwe ga - esochi klas 3
Nkebi nke 5 - nrụpụta na ebumnuche iji nyefe
Mpempe akwụkwọ C - 10 ruo 30 gram
Klas 4 jọgburu onwe ya
Clakpụrụ omume dị mma nke Nkebi 135 na-emetụta
Ọ bụrụ na ị nwere ndekọ omempụ, mgbe ahụ ịkwesịrị igwu egwu n'okpuru iwu dị iche iche iji gosipụta na enwetaghachila gị
Yabụ ọ bụrụ na tozuru oke ịbụ onye na-achọ ịha nhatara ọhaneze n'ihi na ị kpachaara anya mee ya, ikekwe ọ gaghị arụ ọrụ nke ọma.
Iwu sitere na iwu maka ntụle gị na akụkụ mmekọrịta mmadụ na mmadụ maka mkpochapu maka ịda iwu cannabis.
Mwepu maka njide maka "Mmejọ Cannabis Nke Nta" na Illinois
Ọzọkwa njehie ma ọ bụ mmebi iwu dị n'okpuru Iwu Iwu Nchịkwa Ahụ Ike Cannabis
Nke a bụ ihe ọzọ site n'iwu gbasara mmekpa oke cannabis ndị ruru eru maka mkpochapụ na Illinois.
Mwepu na ịha nha ọhaneze na akwukwọ Illinois
Ndewo, m Thomas Howard onye ọka iwu cannabis inwere ike ịchọta na cannabis Industry Lawyer.com ihe ị nweta intaneti maka ajụjụ gị gbasara ịbanye na ịrụ ọrụ na ụlọ ọrụ cannabis nke iwu. Taa, anyị nwere isiokwu na-ekpo ọkụ na cannabis - nhatanha mmekọrịta. Illinois kwuputara nkwalite mmekọrịta ọha na eze na iwu ha ma mepụta mmejọ ndị ruru eru maka mkpochapu nke ruru eru mmadụ dị ka ndị na-achọ ịha nhatara ọhaneze.
Akụkụ mmekọrịta ọha na eze nke akwụkwọ ikike ikike cannabis mejupụtara 20% nke ihe maka akwụkwọ gị yana enwere ụzọ atọ isi nweta ha. 3) ibi na Mpaghara Mmetụta Ọkụ, 1) nwudo ma ọ bụ ịma ya ikpe maka ịpụ ọfụma n'okpuru iwu cannabis ọhụrụ, ma ọ bụ 2) maka ụlọ ọrụ cannabis nwere opekata mpe ndị ọrụ oge 3 ọ bụla site na ọnụọgụ 10 ma ọ bụ 1. Nke ahụ bụ isi nhatanha nke ndi mmadu, obughi ndi choro ya - nihi na i gha acho otutu ihe ichoro na ikike maka isi otu na abuo
Anyị na-aga na-elekwasị anya ugbu a na mmejọ ndị ruru eru maka mkpochapụ. Gịnị bụ ihe ndị ahụ? Iwu Cannabis na Iwu Iwu ('CRTA') na-ekepụta ha site na ịkọwapụta usoro iwu ọhụụ, "obere mmebi cannabis," na imezi ikike nchịkwa cannabis ịgụnye ma nwee ma nwee ebumnuche ikesa oge ọ bụrụ na ọ bụ adabaghị ma ọ bụ klas 4 jọgburu onwe ya.
Kedu ihe bụ obere ịba cannabis? CRTA kọwara ya dị ka mmebi nke Nkebi 4 ma ọ bụ 5 nke Nchịkwa Cannabis nke na-akarịghị gram nke 30 nke afọ, ọ bụrụhaala na ọ tinyeghị nkwalite ntaramahụhụ n'okpuru Nkebi nke 7 nke omume nchịkwa cannabis - na-eme ihe ike na mgbakwunye na ire ahia ma obu inwe ogwu.
Iwu ọhụrụ ahụ na - ewepụ mkpụkpọ osisi cannabis niile na - akpaghị aka, nke nwere ike ịdọrọ nkewa ikike ịma aka n'ihi na naanị gọvanọ nwere ikike ịgbaghara ndị mejọrọ - nke a ga - eche na JB Pritzker ga - eme dịka nke a bụ Bill nke ọ kwadoro ma bịanyere aka. - Ikekwe ịbịanye ụgwọ ahụ bụ mgbaghara ya - na-ekwu n'ihu iwu.
Mgbakorita na-esite na mmejọ ndị ọzọ dị oke mkpa chọrọ ijide akwụkwọ, yana nzukọ ọmụmụ ihe na 2020, iji pụọ na ndekọ gị. Ndị CRTA nyere na ọ bụghị naanị obere mmebi cannabis ka enwere ike ịgbanarị, kamakwa mmebi iwu na mmejọ klas 4 n'okpuru Usoro nke 4 na nke Iwu nchịkwa Cannabis.
Nkebi nke 4 nke Iwu Ahụ Cannabis metụtara inwe, enwere ike ijide gị nwere ihe ruru gram 500 (nke ahụ pere mpe karịa otu paụnd) nke mkpụrụ osisi na-enweghị ikike otu oge - mana ijide ya ọzọ bụ mpụ ka njọ, klaasị 3 njo maka nmebi iwu na-esote. Ga - ejide gị na gram iri atọ ruo iri iteghete na - esote oge ị ga - abụ onye klas 30. Yabụ ọ bụrụ na paụnd cannabis ejide gị otu oge, ị nwere ike ibute ya - agbanyeghị ma nke ahụ mere…
Eleghị anya ebubo gị n'okpuru Nkebi nke 5 nke Iwu Nchịkwa Cannabis maka ị kesaa, nke bụ ịchọrọ ire ire cannabis. Ọ bụrụ na-ebo gị ebubo na nke ahụ, ọnụọgụ mkpụrụ cannabis dị obere. Chargedbụ onye e boro ebubo na ebumnuche ikesa ihe karịrị 10 ma ọ bụ ihe na-erughị gram 30 nke cannabis bụ klas nke 4, ma erughị gram 10 bụ mmebi iwu. Gram 30 bụ naanị ihe ounce, nke nwere ike na-erughị $ 500 na ebe obibi gị, yana kwa ikike inweta iwu n'okpuru CRTA. Eleghị anya ọ bụghị ọnụnọ nke ego iji nweta ya bụ otu enwere ike ịbugharị gị maka ịnwa ịnapụta.
Mmeghari ndị a na - ewulite ihe 2 n’echiche m. Nke mbu, enwere otutu njide maka cannabis n 'odinihu nihi na inwere ikike iru otu ounce nwere ike karie karie, ma obu ndi mmadu bidoro jiri cannabis kwụọ ugwo mmanya ha ma jichaa ya gram na ikwusi ya - ma ndị a obere mmebi niile ruru eru maka mkpochapu, na nke abụọ, nsonaazụ nke njide na-aga n'ihu ga-abụ na ebili nke ndị na-achọ ịkwadoro na-elekọta mmadụ ga-eto - ọkachasị ma ọ bụrụ na ndị mmadụ na-ahazi ihe omume ikike cannabis na obodo dị iche iche amalitela ịgafe iwu nke machibidoro azụmahịa cannabis na ha obodo - Ọ baghị nnabata ezi ezinụlọ iji jide ndị mmadụ maka ime ihe dị mma ma nwee ahụike karịa mmanya ma ọ bụ sịga - ma ọ bụ ọbụna nri ngwa ngwa. Mana njide ndị a ga-ada ngwa ngwa dị ka ha mere na Colorado mgbe ha nyechara iwu.
Ha dara nke ọma, lelee ọ bụghị naanị njide wii wii na Colorado, kamakwa ihe nwere obi ụtọ maka njide DUI - ha sitere na ọnụọgụ abụọ. Maka ihe ndị ọzọ, ahapụwo m akụkọ gọọmentị sitere na Colorado na ngalaba nkọwa yana ejikọtara na ibe weebụ a.
Ọ bụrụ na enwetara gị onwe gị na otu n'ime mmebi mmebi a ma chọọ ịbanye na ụlọ ọrụ cannabis - nweere onwe gị ịgagharị na ebe nrụọrụ weebụ m ma ọ bụ kpọọ m oku.